Barnoota: Qormaati Keemistirii barattootaafi barsiisota Keenyaa dhukkubaaf saaxile - BBC News Afaan Oromoo
Barnoota: Qormaati Keemistirii barattootaafi barsiisota Keenyaa dhukkubaaf saaxile
Barattooonni Keenyyaa qormaata gochaa Keemistiriif dhiyaatan keemikaala summaa'aatti saaxilamanii dhukubsachuu isaanii midiyaan biyyatti 'Daily Nation' gabaaseera.
To'aata qormaata tokkoofi barsiiftuun ulfaa tokkos taatee kanaan booda dhibamuun isaani fi dubartiin kun hospitaalatti yaalamaa jiraachuu ishee gazeexaan kun gabaaseera.
Taateen kun manneen barnootaa Kisuumufi bulchiinsa Tiraanz Inzooyaa lixa biyyatti jirtuutti uumamuu gabaafameera.
Kaawunsiliin Qormaata Biyyaalessa Keenyaa (Knec) hoggantoonni mana barnoota keemikaala 'cyclohexane' jedhamu fayyadamuun isaanirra ture waan dhabameef bakka isaa 'xylene' akka fayyadamaaniif ajajuu isaa gabaafameera.
Hurki keemikaala 'xylene' jedhamu hangi tokkolle afuuraan yoo qaama namaa seene mataa bowwuu, gatantaruu, of wallaluufi hoqissuu fiduu akka danda'u Dhabatti Galmee dhibeefi Wantoota Summii ni hima.
Haalota tokko tokko keessatti 'xylene'ti saaxilamuun du'alle fiduu ni danda'a.
Qormaata kanaratti barattoonni uffaata of eegganna malee keemikaala kana ho'isuun haala isaa akka hubatan irraa eegama.
Aangonni ministera barumsaa rakkoo nageenya keemikalli kun fiduu danda'u dursanii beeku yoo ta'e wanti barame hin jiru.
"Barattooti tokko tokko dhukubbi laphee, mataa bowwuufi garaa ciniinnaa himachaa waan turaniif qormaata booda gara mana yaalaatti hatattamaan isaan geessineerra" jechuun barsiisaan tokko Daily Nation'tti himeera.
Barsiisoti kaawunsilii qormaataa itti gafatamummaa ba'uu dhisuun himataniiru.
"Knec waa'ee sadarkaa qormaataa qofa osoo hin taane haala fayyinaa barsiisota qormata gaggesaniis yaadu qaba. Lubbuun keenya gatii qaba," jechuun qoondaalli gamtaa barsiisota dubbachuu gazeexaan kun gabaaseera.
Knec haga ammati deebii hin kennine.
Sarooti shan barattoota gargaaruuf yunivarsiitii Miidilseeks galan
Biliyeenarri Ameerikaa Roobert F Ismiiz liqii barattootaa koolleejii kaffalan
Keeniyaa: Barsiisaa 'mobaayila barattoota harkaa fudhate' ajjeefame